Hamitaka ve ireo andriamby fitahirizana solika? - mitahiry bebe kokoa
Vao tsy ela akory izay, ny fampahalalana momba ny andriamby izay afaka mamonjy solika dia nanintona ny sain'ny mpamily erak'izao tontolo izao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hahalala izay tena zava-misy na angano. Izy io dia momba ilay fitaovana fitsinjarana solika nanaovana doka, izay mahazatra mahazatra. andriamby neodymium natao hampihenana ny vidin-tsolika rehefa mandeha.
Ny mpanamboatra sasany ao amin'ny tranonkalany ofisialy dia manoratra ireto teny manaraka ireto momba ny fitsipiky ny fizotry ny fiasan'ity fitaovana ity: Ny andriamby an'ny fitaovana izay tsy mitaky herinaratra fanampiny dia manaparitaka ireo residues ireo, izay mamela ny oksizenina hifangaro, ohatra, amin'ny lasantsy, izay mahomby kokoa amin'ny fandoroana. Izany no mahatonga ny tahiry. "
Ny valiny haingana nampanantenain'ny mpamorona: fampitomboana ny androm-piainan'ny peratra piston, catalyst ary plug-pins; tahiry 10-20 isan-jato; mampihena ny famoahana akora manimba isan-karazany efa ho ny antsasaky ny; fitomboan'ny herin'ny moto hatramin'ny fito isan-jato.
Betsaka ireo mpandraharaha antsoina hoe andriamby no manondro ny famononan'ny andriamby nokleary vaovao. Izy io dia ny famoahana na fanamafisana ny angovo elektrômanetika amin'ny zava-mahadomelina rehetra.
Mazava ho azy fa misy vokany ny saha miseho, saingy saika tsy misy ifandraisany amin'ny fitaovana ity. Ampy ny fampahalalana momba an'ity resonance an'ny karazana nokleary-andriamby ity, sy ny famaritana ny trangan-javatra, ary ny valiny azo sy ny sehatry ny fampiharana, dia miharihary fa ny mpivarotra dia mamitaka ny mpamily.
Ny klioba Alemana Automobile Club dia nanao fanandramana amatirana vao tsy ela akory izay. Ity fikambanana ho an'ny daholobe ity, ny lehibe indrindra amin'ireo miasa eto Eropa ankehitriny. Ny asany lehibe indrindra dia ny fanampiana ara-dalàna, ara-teknika ary fampahalalana. Mazava ny fehin-kevitra avy amin'ilay fanandramana - lainga sy fitaka ny andriamby fitahirizana solika.
Ho bonus, misy fijoroana vavolombelona mampihomehy napetraka izay mampiseho ny fanesoana rehetra an'ireny andriamby ireny:
Mifandraisa amin'ny psychic izay manamboatra fiara amin'ny sary;
Fiverenana 100% ny fanamafisana ny lasantsy amin'ny piston. Izany dia manome ny vokatry ny baomba nokleary;
Ny karatra Tarot dia mampihena be ny fanjifana rehefa apetraka amin'ny seza any aoriana. Indrindra raha mitafy kapila vita amin'ny foil ny mpandeha sy ny mpamily;
Mampiasà Miracle Pribluda fa tsy andriamby. Fivoarana miafina tsy manam-paharoa ataon'ny mpahay siansa miaramila. Apetaho amin'ny dashboard izany ary hihazakazaka moramora kokoa ny motera noho ny famoahana ny karazana quasi-magnet. Ary noho ny saha nano, ny rindrina varingarina dia hosaronan'ny sosona titanium manify indrindra, izay mampitombo ny loharano matetika.
Ho fanampin'izany, ny fikorianan'ny vortex andriamby dia hamorona fihenjanana amin'ny rafitry ny solika, izay hiteraka vokadratsin'ny vortex oktana, izay hampiakatra 15% ny isa oktana ary hampihena 20% ny fanjifana solika.
Ho famaranana, dia mbola hilazana ihany fa ny fitaovana toekarena solika niseho niaraka tamin'ny fanampian'ny andriamby sy ny takelaka MPG - CAPS dia fitaka ihany koa ary ny fampiasana azy ireo dia tsy manome toekarena solika. Ity lahatsoratra ity dia natambatra sy nosoratana vokatry ny asa tamin'ny fitaovana maro amin'ny Internet.
Tsy misy ny entona fandrehitra akory. Ny mety ho antony, vahaolana amin'ny olana
Misafidiana maotera: izay tsara kokoa, solika na diesel
Ny fofon'ny lasantsy ao anaty fiara: ny antony lehibe mahatonga ny fisehoany
Prev Akoho ao anaty lafaoro misy ovy sy holatra
Manaraka Fanamboarana fiara - maninona ary amin'ny fomba ahoana?